Jikada Silicone Qaadada Nasashada, Is-bedbeddeli kara Almond-qaabeeya, Silicone Jikada Maacuunta Nasashada Nasashada Hayaha
Ka samaysan 100% silikoon heer cunto ah, Kuleyl adkaysi u leh, aan sun lahayn, BPA bilaash ah, waara, dabacsan U isticmaal maacuunta jikada, qalabka, miiska wax lagu jaro, si aad u dhigto qaadadaada, burushka, maacuunta iyo wixii la mid ah, si aad ugu ilaaliso shooladdaada dusheeda, miiska dushiisa, counter nadiif U noqo heerkulka sare ilaa 500 ° F, waxaad ku ridi kartaa maacuuntaada wax lagu kariyo xitaa hadaad ka soo saartay weelka kululeeyaha oo nadiif ah, gacmo-dhaqashada oo lagu taliyay in la kordhiyo nolosha alaabada Noocyada Nooca Bakeware Brand habeynta Model Tirada...
Cajaladda Afka Dhiska ee Whisk Whisk Birta Birta Birta ah ee Whisks lagu xidho cusbada epoxy
【Waxyaabaha】 Iyo cajiinka cajiinka oo kasta wuxuu ka samaysan yahay darajo adag oo heerkeedu sarreeyo oo ah 304 bir bir ah oo birta ah, qalab alwaax leh oo adag oo adag, kaas oo siinaya qabasho aad u fiican waxayna kaa caawin kartaa inaad isku darto cajiinka dhegdheg ah. Naqshad wax ku ool ah】 Noocyadeenna cajiinka ah ee loo yaqaan 'Danish whisks' waxay leeyihiin laba indhood oo naqshadeysan oo ah 2 jeer oo si dhakhso leh isugu qasma kan isha. Dekedda isku xidha ee cajiinka uumi inta u dhaxaysa xamili iyo siligga waxaa lagu shaabadeeyey cusbi epoxy. Marka uma baahnid inaad ka walwasho bur ...
Xirfadle Box Box, 4-Dhinac aan Nadiifin oo Bir Weyn oo Weyn oo Loogu Talagalay Jiis Parmesan, Sanjabiil, Khudaar, miraha, shukulaatada, lowska iyo inbadan
4 Grater-ka ku yaal Grater-ka waxaa ku yaal 4-Dhinac aan Nadiif ahayn oo birta ah sida Coarse Shred, Dhex-dhexaad Shred, Fine Shred / Zester iyo Slicer, dhammaantoodna ku jira hal qalab oo ku habboon. iyo qajaarka. Multi-functional leh gacan qabsi oo ku siinaysa wadarta xakamaynta. Baalayaasha birta biraha ah ee biraha biranka ah ： Sharp ahama birta birta ah ayaa shaqada si dhakhso leh u qabata waxayna keentaa in si nadiif ah loo jarjaray oo la shiiday. Midi fiiq-fiiqan oo leh ilko aan xirmin ...
MINI Mashiinka Mashiinka Mashiinka Loo Sameeyo-Guga iyo Easter Cookie magaabay / Mini Joometric Qaab Nooca Kukiyada, Wareega Mini Cookie Jarista / Mindi Nooca Dout Khudaarta / Muuqaalka Kukiyada Gooye
[Maaddad tayo sare leh] cookie magaabay ka samaysan tahay 430 ahama, taas oo miridhku u adkaysta, daxalka u adkaysta oo ka cimri dheer birta caadiga ah. BPA-la'aan, dib loo isticmaali karo, adkeysi leh oo aan dheg dheg lahayn, si sahlan loo nadiifin karo, iyo geesaha laaban ayaa saaxiibtinimo leh gacmaha. Fadlan gebi ahaanba qalaji kahor intaadan keydin. [Tayo wanaagsan iyo badbaado] -Bakhtar-goynta buskudku wuxuu ka samaysan yahay birta birta ah ee aan lahayn birta, BPA-ka oo aan lahayn, dib loo isticmaali karo, adkeysi leh oo aan dheg-dheg lahayn [Qaabab kala duwan oo wasakh ah] -Tani waa caaryo buskud / caaryo buskud ah, wh ...
Culeys waara oo culus: Jillaab yar ayaa xoog leh. Awood qaadid xoog leh, culeys culus 5kg / 11lb waxyaabaha. Ma dhicin Xasilloon oo dib loo isticmaali karo Sahlan in la isticmaalo: maaddada wax isku xidhka ee aan calaamadeysnayn, isku xidhka kaamil ah, diirka oo dhaji. Daldala qunyar socod iyo taag. Fudud oo dabacsan, Naqshad wanaagsan: Qaabka ayaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo baahida shaqsiyeed ee macaamiisha. Biyo-ilaalin iyo huur-diidmo: kuma dhici doonto xitaa qubeyska musqusha hoosteeda. Wax saameyn ah kuma yeelanayo dhejiskeeda iyo ...